बलात्कार…!! | Butwal Dainik
९७५ पटक पढिएको
बलात्कार भनेको एक प्रकारको नारी माथि गरिने शोषण हो । सामान्यत: बलात्कारको भनेको यौन शोषण हो । कुनै व्यक्तिको इच्छा चाहाना विपरीत गरिने दुर्ववहार लाई नै बलात्कार भनिन्छ । चाहे उ नारी होस वा पुरुष नै किन नहोस दुवैमा बलात्कार हुन सक्छ तर हाम्रो पुरुषप्रधान जस्तो देशमा नारीमाथि न‌ बलात्कार भईरहका छन । अन्य बाहिरी देश भन्दा हाम्रो देश नेपालमा बलात्कारको सङख्या दिनप्रतीदिन बढ्दै गएको पाईन्छ । बलात्कार दिनप्रतीदिन बढ्दै गएका कारण हामी नारी स्वन्तत्र रुपमा खुले आम हिड्न गाह्रो हुने गर्दछ।
बलात्कारले गर्दा कतिपय महिला र बालिकाले जीवन गुमाउन बाध्य भएका छन् । बलात्कार भन्ने बितिकै शारीरिक सम्पर्कमा आउनु मात्रै होइन । यदि कोही व्यक्तिले तपाईंलाई गलत दृष्टिकोणले हेर्छ या नराम्रो दुर्व्यवहार गर्न कोसिस मात्र गर्छ भने पनि त्यो एक प्रकारको बलात्कार नै हो । बलात्कारको शंत्रास यति बढ्दै गएको छ कि हामी नारी, महिला, बालिका कोही पुरुष, युवा सँग हासेर बोल्दैमा कोही केही हुने हो कि भन्दै डराउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बलात्कारको संख्यामा यस्तो पाउन सकिन्छ । पछिल्लो तथ्यांकमा अफ्रिकामा ६००, भारतमा ३२,०३३ छ तर दिनमा ८८ वटा बलात्कारको केस दर्ता हुन्छन । हाम्रो देश नेपालमा २१४४ बलात्कारको रेकर्ड छ र ६८७ नाबालिग चेलीहरु बलात्कारको सिकार भएका छन् । त्यसै गरी २०१८ सालमा १३ वर्षिय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारकै कारण जीवन गुमाइन । हामीले समाचारहरुमा पनि सुन्न, देख्न र पढ्न सकिन्छ की ५ जनाले एउटा ६ वार्षिय बालिकाको सामुहिक बलत्कार गरेर उनलाई मारेर खोलामा फालेको घटना सर्ववितितै छ । यो सँगै यस्ता बलात्कारका घटना घटाउने अनि घटनाबाट बच्न बालिका तथा महिलालाई हत्या गर्ने अनि शवलाई झाडि,जंगलमा फालिदिने जस्ता अमानवीय घटना घटिरहेका छन । यस्ता घटना हामी सबैले देखिरहेका हुन्छौं, सुनी रहेका हुन्छौं तर आवाज उठाउन सकिरहेका हुदैनौं । उठाइहाले पनि प्रहरी प्रशासन, सरकारले हाम्रो आवाज सुन्दैन। प्रहरी प्रशासन त जनताको सहयोग र सुरक्षाको लागी हो नी, होइन र ? मैले यो भनेकी छैन कि ‘हाम्रो रिपोर्ट फाइल हुन्न भनेर’ हुन्छ हुनलाई तर हामी नारीले न्याय पाएको चाही खोइ ? हाम्रो आवाज आखीर कहिले सम्म सुन्छ त सरकार र प्रहरी प्रशासनले ?बलात्कारीहरुले फासी कहिले पाउछन त ? आखिर कहिले सम्म हामीले हाम्रो आवाज दबाउन पर्छ ? यस्ता धेरै प्रश्न छन् तर बिडम्बना उत्तर छैनन् ।
केहीदिन अगाडीको कुरा हो । शिक्षक द्धारा विद्यार्थीको बलात्कार, बाबाद्धारा छोरीको बलात्कार, दाजुभाइ द्धारा आफ्ना दिदीबहिनीको बलात्कार यस्ता अमानवीय र सोच्नै नसकिने हर्कतहरु भईरहेका छन । बाहिर स्वतन्त्रता रुपमा जिउन त छोडीदिनुस हामी छोरीचेली त हाम्रै घरमा सुरक्षित छैनौ, हामीलाई पढाउने शिक्षक बाटै सुरक्षित छैनौ भने हामी कहाँ जाने ? कोसँग न्यायको स्वतन्त्रताको अपेक्षा राख्ने ? हाम्रै राष्ट्रपति पनि महिला हुनुहुन्छ यो हामी महिलाहरुको लाई मात्र नभई नेपालकै लागि खुसिको कुरा हो तर अरुले त न्याय दिएनन् दिएनन् राष्ट्रपति ज्युले नै निर्मलालाई न्याय दिन सक्नुभएन । निर्मलाले अझै न्याय पाएकी छैनन् आखिर किन भइरहेछ त यस्तो ? गरिबको लागी छुट्टै र धनीको लागी छुट्टै कानुन हुन्छ र ? गरीबको लागी सबै नियम कानुन लागु हुनु र धनीको लागी नियम कानुन नै नबनाइए जस्तो गर्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । यहि कारणले नै हाम्रो देशमा अझै पनि बलात्कारीहरु खुले आम घुमि रहेका छन् ।
यदी हाम्रो देशमा रहेका बरिस्ठ व्यक्त जो राजनितिक रुपमा बलियाछन, विभिन्न पार्टीका नेता ज्युहरुका आफन्ता तथा उहाहरुकै छोरीचेलि माथि बलात्कार भईदिए उनिहरुले बलात्कारको कारबाही गस्न सक्दैनन्थे होला र ? पुष्प कमल दाहालको छारीलाई कसैले दुर्व्यवहार गरेको भए,बलात्कार गरेको भए, के उहाँ चुप लाएर बस्नु हुन्थ्यो होला त? सबैलाई थाहा छ निर्मलाको हत्या कान्डको बारेमा तर न्याय खोज्न जादा प्रमाण खोज्छ । प्रमाणका लागि दृष्टि अगाडी हुदाँहुदै पनि कागजी प्रमाण खोज्छ सायद यहि नै होला कानुन अन्धो हुन्छ भनेको । के नारी भएर जन्मीनु साचीकै अभिषापनै हो त ?
जुन दिन बलत्कारीहरुले सजाय तथा फासी पाउने छन् त्यो दिन देखि हामी नारीहरु स्वतन्त्रता रुपमा जिउन पाउने छौं । आफुलाई सुरक्षित महसुस पाउने छौँ । नियम कानुन सबैको लागी एक समान रैछ भनेर विश्वास गर्नेछौं । दोसीलाई सजाय दिनैपर्छ । आफ्नो छोरीलाई यो नगर भन्न अगाडी आफ्नो छोरालाई नारीको सम्मान र इज्जत कसरी गर्ने सिकाइनुहोला । पुरुष त्यो हो जस्ले नारीको इज्जत र सम्मान गर्छ ।